Mpanamboatra sy mpamatsy Boom Lift | China Boom Lift Factory
Boom Liftdia vokatra lehibe amin'ny indostrian'ny asa an-habakabaka izay ahitana ny fisondrotan'ny boom towable, ny fisondrotan'ny boom voarindra tena ary ny fisondrotan'ny fivoahana ho an'ny teleskopika. , fananganana boom ho an'ny tenany manokana, fiakaran'ny aliminioma ary sehatra asa an'habakabaka hafa mila entina amin'ny kamio be avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa. Ny sakany miasa: samy hafa amin'ny fibatana hety, fiakarana alimina ary fiakarana vetivety hafa, ny fisondrotan'ny boom towable dia tsy afaka miasa amin'ny lalana mitsivalana ihany fa afaka mahatratra elanelana marindrano amin'ny 5.2m ka hatramin'ny 9.5m.
Ny fiakarana fivoahana azo entina dia iray amin'ireo vokatra lehibe eto aminay. Izy io dia manana haavon'ny fiakarana avo, ambaratonga fandidiana lehibe, ary ny sandry dia azo aforitra ambonin'ny vato misakana eny amin'ny lanitra. Ny haavon'ny Max Platform dia mety hahatratra 16m miaraka amin'ny 200kg fahaizana.
Ny fisondrotan'ny boom voarakitry ny tena dia afaka mifanaraka amin'ny tontolo iasan'ny sambo. Ny lampihazo mandeha sy ny fihodinan'ny boom dia tokony hasiana freins azo antoka hahazoana antoka ny fanaraha-maso azo antoka amin'ny lalana sy mandritra ny fiasana.
Ny Daxlifter Self Moving Artulitated Boom Lift miaraka amin'ny herin'ny bateria dia vokatra manasongadina ao amin'ny katalaogim-pamokarana. Ny tombony lehibe indrindra dia ny fipoahana voatonona miaraka amin'ny alàlan'ny sakana eny amin'ny lanitra.
Self propelled Telescopic Boom Lift miaraka amin'ny herin'ny diesel dia mety ampiasaina amin'ny toerana fananganana lehibe, tokotanin-tsambo, fanamboarana tetezana ary tetikasa hafa, miaraka amin'ny fivezivezena tsy manam-paharoa sy ny fahaiza-miasa mahomby. Mazava ho azy fa somary avo ny vidiny.
Fanamafisana ny baomba Telescopic Boom
Ny teboka manan-danja indrindra amin'ny fananganana boom teleskopika dia ny hahatratra ny haavon'ny sehatra avo lenta raha oharina amin'ny fampisondrotana boom.
Ny hatezerana miasa be dia be manao izay mahamety ny karazan-tsain'ny Wordking. Ny famolavolana firafitra manokana dia azo ampiasaina ety ivelany sy any an-trano. Ary misy tombony maro azo avy amin'ny fisondrotana boom vita amin'ny artikolika azo alefa, ny AL-KO Retractor Alemanina miaraka amin'ny frein parking sy ny inertia freins. Drag Rod tsy azo ihodivirana ho an'ny fitaterana sy ny fitoeran-kaontenera mety. Tavy solika hydraulic miaraka amin'ny rafitra filtration: ny vavahady solika sy ny fivoahan'ny solika dia misy fantsom-pitazanana, tsy ho 0 intsony ny gage pressure raha vao misy lalan'ny solika tsy mandeha maloto.